Layaabka — Caasimada Online | Isha Wararka Sugan
VIDEO: Wariye caan ka ahaa Muqdisho oo la yaab lasoo laabtay… “Daawo”	October 2, 2013 2:52 PM0 comments	Caasimada Online: Wariye si weyn u yaqaanan Shacabka reer Muqdisho caana ka ahaa oo aan magaciisa idiin sii qarinaya ayaa mar qura muddo kadib ka soo muuqday Warbaahinta Muuqaalka asagoo sameynayo ruwaayad cusub. Wariyahaan oo muddooyinkii damba aan la maqal oo si kadis ah ku noqday Jilaa balse dad badani […]
VIDEO: Dhibaatada Heysata Qaxotiga Somalida Holand. “Arin Naxdin Badan”	October 1, 2013 1:15 PM0 comments	Caasimada Online: Wadanka Holland oo ka mid ah Wadamada ay Soomaalidu weydiistaan Magangalyo ayaa waxuu waayadaan dambe la soo baxayay dhaqano aad looga naxo kuwaas oo ah in maalin cad uu bahdilo Qaxootiga Soomaaliyeed iyo kuwo Ajinabi ah ee u soo nolol doontay si ay u helaan nabad galyo. Warbaahinta […]
VIDEO: Derbi jiif Mareykan oo taajir ku noqday daacadnimadiisa darteed	September 25, 2013 3:00 PM0 comments	Nin derbi jiif u dhashay dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Glen James ayaa mudo saacado ah kadib ku noqday Taajir nolol wanaagsan u bilaabatay, taasoo gaarsiisay daacadnimadiisa, kadib markii uu meel Suuq ah uu ka helay lacag 40 Kun oo Dollarka Mareykanka, wuxuuna siduu u waday uu farta ka saaray […]
VIDEO: Geel hadlaayo oo qosolka kaa dhameeynaya	September 19, 2013 12:40 PM0 comments	Caasimada Online: Xayeysiin loo sameeyay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Geico ayaa noqotay tan ugu qosol badan oo loogu daawasho badanyahay bishaan, kadib markii ay soo bandhigeen geel hadlayo oo qashqashaadayo saaxiibidiis xafiiska la jooga asigoo soo xasuusinayo maalinta arbacada oo loo yaqaano Hump Day. Waxaa filimkani […]
VIDEO: Nin Soomaali oo buuq ka sameyey Airport-ka Australia	September 11, 2013 4:07 PM0 comments	Caasimada Online: Ninkani oo lagu magacaabo Osmaan ayaa buuq iyo sawaxan ay dadku ka amakaageyn ka sameeyay Wadanka Australia kadib markii uu ka hor yimid in la baaro si loo fiiriyo Boorsooyinkiisa. Osman ayaa ku doodaya in dhowr jeer oo hore uu halkan kala kulmay dhacdooyin nuucaan ah balse Shaqaalaha […]
VIDEO: Wiil yar oo Somali ah oo Su’aal cajiib weydiiyay Sheekh	September 10, 2013 5:12 PM0 comments	Caasimada Online: Wiil yar oo Soomaaliyeed oo ka mid ah caruurta ku dhashay qurbaha ayaa Su’aal cajiib ah weydiiyay Sheekh Ilyaas Cali Nuur oo fadhiyay mid ka mid ah TV-yada Soomaalida, su’aashaasi oo ku adkaatay in uu ugu jawaabo wiilka yar ee Illaahey caqliga iyo maskaxda ku maneystay. Wiilkaan ayaa […]
VIDEO: Arooskii ugu cajiib iyo qosol badnaa caalamka	September 9, 2013 5:19 PM0 comments	Caasimada Online: Caalamka waxaa ka dahca Dhacdooyin kaa yaabinaya kuwaas oo nuucyo kala duwan isugu jira waxaana ka mid ah Aroos cajiib ah oo ka dhacay Wadanka Hindiga. Ruux walba oo guursanaya xiliga uu doonaya in uu aqal galkiisa dhaca wuu ku farxaa balse Wadanka Hiniya waxeey lee yihiin dhaqan […]
Somalida waxaa la dilaa maalin kasta, balse ka waran dhacdadan	August 23, 2013 7:00 AM0 comments	Eey ku nool New Zealand ayaa bad-baadiyay Nolosha Bisad, ka dib markuu Dhiig ugu tabaruco. Arrintani waxay meesha ka saartay Aragtiyo la qabay oo ahayd inuu jiro Qilaaf u dhexeeya Noocyada Xayawaanka, waxanaa arrin Dhif ah ay noqotay in Dhiig la isaga kala shubo Noocyo kala duwan oo Xayawaan ah. Rory waa […]
Daawo Video: Sida Sacuudiyaanka u dulleystaan muslimiinta kale	February 1, 2013 5:32 AM0 comments	Muuqaalka Maanta aan idiin soo gudbineyno waa Arin aad looga xumaado marka aa daawato. Waa Askari Sacuudiyaan ah oo si xun ula dhaqmayo Muwaadin u dhashay Wadanka Bangaladesh oo muslim ah,asagoo kula kacayo fal laga argagaxo. Hadaba Aqristoow Muwaadinkaan Bangaladeshka ah ayaa waxaa lagu qasbayaa in uu shumiyo lugta gacanta […]
Daawo Video: Ukun dad badan ka yaabisay adna ka yaabin doonta.	January 31, 2013 2:00 AM0 comments	Intaad dunida nooshahay wax kasta iska filo maalin un baad arkeysaa. Maanta waxaan idin soo gudbineynaa video yaab badan oo ka yaabiyay dad badan. Nin ayaa waxa uu isku dayay inuu jabsado Ukun, si uu markaas u dubto, una cuno, hase yeeshee markii ukunta uu jebiyay ayaa waxaa kasoo dhex […]